မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: ကိုရီးယား စစ်ဖြစ်နေပြီတဲ့...
Posted by mabaydar at 7:34 PM
11/23/2010 9:35 PM
တော်တော်ဟုတ်တဲ့မဗေဒါ။ ပို့စ်တင်တာမြန်ပါ့။ မနက်က သတင်းမှာ တောင်မြောက်သတင်းကြည့်ပြီး တောင်ကိုရီးယားက (၂)ယောက်သေတယ်ဆိုတော့ အရင်ဆုံးသတိရတာ မဗေဒါကိုပဲ။ အရင်တခေါက် စစ်ထဲဝင်တဲ့မင်းသားတွေ အကြောင်းရေးတော့ ဆုတောင်းထားသေးတယ်ဟုတ်။ မဟုတ်မှလွဲရော မဗေဒါဆုတောင်းတာကြားပြီး ဟိုဂျပုက လှမ်းဆော်တာနေမှာလို့ မဗေဒါကို စမလို့ဟာ လာကြည့်တော့ သူကပို့စ်တောင်တင်ထားပြီးပြီ။
11/23/2010 9:56 PM
ပစ်ရင်တည့်တည့်ပစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားမှတ်မိသွားတယ်၊ မြောက်ကပြောတယ် ပစ်မကစားဘူးတဲ့။
ဒီနေ့ SKKS drama ကိုစောင့်ကြည့်ရင်းနဲ့ SBS breaking news မှာတောက်လျှောက်ပြနေတဲ့ စစ်သတင်းကိုသတိထားမိတယ်။ drama ကြည့်ပြီးရင် မဗေဒါကို လာပြောအုံးမယ်လို့ စဉ်းစားထားတာ သူကဦးနေပြီ။ မြန်ပါ့။
11/23/2010 11:51 PM
ဘေးအန္တာရယ်ကင်းကြပါစေ .. စစ်သတင်းတွေ မကြားချင်ဘူး ..း(
အမှန် အမှား ကိစ္စ ကို ဖယ်ပြီး ပြောရရင် မြောက်ကိုရီးယား ကပစ် တယ် (တစ်နာရီ လောက်)။ တောင်ကပြန် ပစ်တယ်။ တောင်ဖက်က စစ်သားသေတယ်။ မြောက် ဖက်က ဘယ်လောက်သေသလဲ မသိဘူး။ တောင်ဖက်က စစ်ဖြစ် ချင်ရင် မြောက်စစ်စခန်း ကိုပြစ်မှာပေါ့။ လူဦးရေ 1600 ပဲရှိတဲ ကျွန်းကို ပစ်တာ ချောက်ရုံသက်သက် ပါ။ စစ်မဖြစ်ပါဘူး။ world စီးပွါး ပျက်ကပ် တောင် recover မဖြစ်သေးဘူး။ စစ်ပွဲ ကြီးဖြစ်ဖို့ ရာနှုန်းနဲတယ်။
Sorry, wrong comment on previous one.
အမှန် အမှား ကိစ္စ ကို ဖယ်ပြီး ပြောရရင် မြောက်ကိုရီးယား ကပစ် တယ် (တစ်နာရီ လောက်)။ တောင်ကပြန် ပစ်တယ်။ တောင်ဖက်က စစ်သားသေတယ်။ မြောက် ဖက်က ဘယ်လောက်သေသလဲ မသိဘူး။ မြောက်ဖက်က စစ်ဖြစ် ချင်ရင် တောင်စစ်စခန်း ကိုပစ်မှာပေါ့။ လူဦးရေ 1600 ပဲရှိတဲ ကျွန်းကို ပစ်တာ ချောက်ရုံသက်သက် ပါ။ စစ်မဖြစ်ပါဘူး။ world စီးပွါး ပျက်ကပ် တောင် recover မဖြစ်သေးဘူး။ စစ်ပွဲ ကြီးဖြစ်ဖို့ ရာနှုန်းနဲတယ်။
အော်... အမြှောက်တွေနဲ့လဲပစ်တယ်... လူတွေလဲသေတယ်... နယ်ခံတွေလဲ ထွက်ပြေးရတယ်... အဲဒါ စစ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့... ရေဗူးပေါင်းနဲ့ ဆော့နေကြတာဖြစ်မယ်နော်... အမျှော်မြင်ကြီးပါပေတယ်.... ကျွန်မသာ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်လိုလူမျိုးဆိုရင် ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်မို့ အမေရိကန် နလန်မထူနိုင်သေးခင် သူတို့လှုပ်ရှားမှ သူတို့ အောင်မြင်ဖို့ အခွင့်လန်းများတဲ့အတွက် ဒီအချိန်က သူတို့အတွက် အကောင်းဆုံးအချိန်လို့ထင်တာပဲ... ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံရေး စစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကိုယ်လဲ ဘာမှ မသိတော့ ဘာမှ comment မပေးချင်ဘူး... ဒါပေမဲ့ အမြှောက်တွေနဲ့ ပစ်နေကြတာကို မြန်မာစကားမှာ စစ်ဖြစ်တယ်လို့ သုံးနှုန်းတယ်ဆိုတာတော့ သေချာသိတယ်...
ကျေးဇူးပါပဲနော်... သူ့အမြင်ကိုယ့်အမြင် ဖလှယ်ခွင့်ပေးသွားတဲ့အတွက်...
အဲဒါ ဆိုရင်မဗေဒါ စိတ်ပူတာ နောက်ကျသွားပြီ။ May 20 မှာ တောင်ကိုရီးယား စစ်သဘော မြှုပ်သွားတာ ကြားလား မသိဘူး။ တော်ပီဒို ကြောင့်။ လူတွေ သေတယ် (more than now ;46 sailors) ။ စစ်ဖြစ် တယ်လေ။ ကျနော် ပြောတဲ့ စစ်က တဖက်နဲ့ တဖက် ရေရှည် တိုက်ခိုက် ကြတာ ကို ပြောတာပါ။ world စီးပွါး ပျက်ကပ်ကြောင့် အမေရိကန် အထိနာ နေတုံး တိုက်မယ်ဆိုရင် stock market တောင်မရှိ တဲ့ north korea ကပိုပြီး မနစ်နာဘူးလား။ ဥပမာ။ တောင်က မြောက် ကို စစ်နိုင်လို့ ရှိရင် အမေရိကန် စစ်စခန်း တွေ တရုတ် နဲ့ ပိုနီး လာမယ်ဆို တာ သတိထားမိလား မသိ။ တရုတ်အစိုးရ လူမိုက်အားပေးလုပ်နေတယ် ဆိုတဲ့ အချက်သဘော မတူပါ။ တောင်၊ မြောက် နှစ် နိုင်ငံ စစ်ဖြစ် ရင် တရုတ် နဲ့ အမေရိကန် ပါ ပါလာမှာ ဖြစ်တဲ့ စစ်မြေပြင် ဖြစ်တဲ့ ကိုရီးယားမှာ ပိုတိုးတက် တဲ့ တောင်ကိုရီးယား ကပိုပြီး နစ်နာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် စစ်ပွဲ ကြီးဖြစ်ဖို့ ရာနှုန်းနဲတယ် လို့ပြောတာပါ။ မြောက်ကိုရီးယား က တောင် ကိုတကယ် နစ်နာ အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒိ အချိန်မှာ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ စစ်စခန်း တွေကို ပစ်မှာဖြစ်ပါ တယ်။ အဲဒါကြောင့် မြောက်ဖက်ကလဲ စစ်ဖြစ်ဖို့ မလိုလားဘူးလို့ ကျနော်က ယူဆ ပါတယ်။
My comments are not meant to be hurt.If u don't like them, pls delete all.
I won't delete your comment.. You can think what u like and I will believe what I think is right. Anyway, most people know who are bad and who are good. Which country citizen are poor and which country are developed. And we do know China is supporting bad countries or good countries. As I already mention above that I am not expert in politics and war, I will not say anything about it anymore. But i knew the news of May 20 incident.
Onlyagroup of people think China is not လူမိုက်အားပေး. Can you pls stop commenting about war and politics on my blog? I write what i believe and you don't really need to agree with me.